yemahara pane apple chitoro chitsva 2021 yepamusoro mitambo
3D! Nakidzwa nekuseka, kukwikwidza uye hasha! Rova iyo maze tenzi yakatemwa nguva yema labyrinths, maze morphing mhedzisiro uye inogara ichichinja mepu vasati vaputsa! Wana mibayiro!
Nyudza uye bvisa pfungwa dzako muzviratidzo zve3D, mifananidzo yakajeka uye mimhanzi inoyevedza uye kurira paunenge uchishandisa yako nekukurumidza witi kugadzirisa anogara achichinja mazamu anonakidza pamwe nemhedzisiro. Yakakura kutamba uye kutarisa shamwari inokundikana kana kubudirira! Yakanakisa 2021 yekuita maze mitambo. Uyu mutambo wepachena unowanikwa pane chitoro cheapuro. Tevera yeapuro chitoro chinongedzo pamusoro kurodha mahara.
Kurumidza Game Chirevo: Tiza iyo maze tenzi madimendi ane nguva yakatarwa labyrinths. Gadzirisa nzira dzinomira, nzvenga misungo, uye unganidza makiyi maze isati yaparadzana. Imwe neimwe maze nhanho inowedzera mukuomerwa uye inochinja pese paunotamba! Tora maze tenzi simba nekutora: mari kuti uve super orb, matombo ekuwana mibairo, uye makiyi egoridhe ekuvhura emakamuri emabhonasi. Tarisa uone maorbs uye levers ayo anogona kuponesa hupenyu hwako. Rova maze tenzi mazinga kuhwina mukombe uzere neMazematize mari! Nakidzwa nemitambo mitanhatu yemitambo: mazinga, arcade, makiyi, nyore uye gadzira. Pakazara, anotyisa mafaro retro arcade dhizaini yekukurumidza chiito maze mutambo uyo unozo pokana nepfungwa dzako iwe uchiyedza kutiza.
Yakazara Game Tsananguro: Shandisa njere dzako kuti uwane nzira yako yekubuda kubva padimendi maze masters ane nguva yakatarwa labyrinths nekugadzirisa nzira dzinodzungaira, uye kupukunyuka misungo uye kuunganidza makiyi usati waparadzwa. Sarudza yako kudenha kubva kune mashanu mutambo modhi sarudzo mumenyu huru: mazinga, arcade, gadzira, makiyi uye nyore.